Sidee ayey u muuqanaysaa SHAXDA ay garoonka ku soo geli doonto Kooxda Chelsea kulanka ay caawa qaabilayso Arsenal? – Gool FM
Haaruun January 21, 2020
(London) 21 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa indhaha ku haysa inay dheereysato dhibcaha ay ku fadhiso kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, marka ay caawa garoonkooda Stamford Bridge ku soo dhoweynayaan naadiga Arsenal kulan ka tirsan horyaalka.
The Blues ayaa la dhibtoonaysa siddeed guuldarro oo horyaalka ku soo gaaray xilli ciyaareedkan oo ay ku jirto khasaaradii 1-0 oo ay kala kulmeen Sabtidii naadiga Newcastle United, laakiin kooxda Tababare Frank Lampard ayaa weli fadhisa kaalinta afaraad, waxaana ay shan dhibcood oo nadiif ah ka sarreeyaa kooxda kaalinta shanaad ku jirta ee Manchester United.
Chelsea ayaa guuleysatay kulankii ugu dambeeyey ee labadan kooxood ku dhexmaray garoonka Stamford Bridge waxaana ay ku adkaatay 3-2 bishii Agoosto ee sanadkii 2018-kii, halka Arsenal aysan ka adkaan kooxda ay xafiiltamaan ee Blues tan iyo bishii October sanadkii 2011-kii.
Xiddigaha ka maqnaanaya kulankan kooxda Chelsea iyo kuwa shakiga la galinayo:-
Xiddigaha Chelsea ee seegaya kulankan: Ruben Loftus-Cheek (muruqa dambe ee lugta), Christian Pulisic (Gumaarka), Marco van Ginkel (Jilibka), Marcos Alonso (bowdada).
Xiddigaha shaliga galinayo Blues kulankan: Kaliya hal ciyaaryahan ayaa shaki laga galinayaa kulankan waa Reece James kaasoo sheeganaya dhaawac dhanka Jilibka ah.
Haddaba shabakadda ciyaaraha ee Sports Mole ayaa shaacisay sida ay u muuqan karto shaxda ay kooxda Chelsea ay kala hortagayso Arsenal kulanka London Derby & Safka uu ku soo shir tagi karo macallin Frank Lampard.
Martínez iyo Kane oo hoggaaminaya liiska xiddigaha ay dooneyso Barcelona inay ka dhigato badelka Suarez
Ciyaaryahan Cabdulqaadir Benteke oo saddexleey ku soo afjaray abaartii gool la’aaneed ee muddo haysatay... + SAWIRRO